QODOBBADA DHAQAALAHA IYO BAYOOLAJIGA QIIMAHA KALMYK EE LO'DA - XOOLAHA
Kalmyk ee lo'da
Kalmyk caleenta lo'da maanta ayaa loo tixgeliyaa in uu yahay jilida ugu fiican ee jihada hilibka.
Xayawaanka Tani waxay u fiican tahay xoolaha ee gobollada leh xaalado cimilo qallafsan, laakiin sida sahlan loo daryeelo gobollada leh jawi dhexdhexaad ah.
Waxay si weyn uga duwan tahay lo'da leh xididdada Yurub, tan iyo markii ay awoowayaashu yihiin lo'da.
Si loo ilaaliyo loona dhoofo xoolaha oo kale guriga waa shaqo aad u fudud oo faa'iido leh.
Macluumaad faahfaahsan oo qiimo leh oo ku saabsan lo'dooyinkan cajiibka ah ayaa laga heli karaa dib-u-eegiskayaga hoose.
Tilmaamaha la tarxiilay: macluumaadka ugu faa'iidada badan ee loogu talagalay jilayaasha
Dhismaha Kalmyk ee lo'da ee lo'da waxaa ka muuqda afar nooc oo xayawaan ah: Lower Volga, North Caucasian, Siberian, iyo Kazakhstan.
Xayawaanka dhammaan noocyada kore waxay badanaa leeyihiin miisaanka nool ee kala duwan. In caanaha lo'da ee lagu sharraxay noo, laba nooc oo waaweyn ayaa la kala saari doonaa: hilibka lo'da ee dabaysha iyo hilibka lo'da.
Marka la barbar dhigo nooca Bisaylka dambe, qajiyadaha hore u bislaaday waxay leeyihiin miisaan yar, sidoo kale astaamo badan oo aad u sarreeya. Waxaa lagu gartaa lafaha iftiinka, maqaarka khafiifka ah.
Koritaanka jirka oo dhan wuu istaago, taasoo muujinaysa ka hor intaanay bilaabin nudaha unugyada. Sidaa darteed, dhalidda xoolaha ah ee nooca Bisaylka dambe ee lo'da waa 2-4% ka hooseeya xayawaanka ee nooca Bisaylkiisa hore ee Kalmyk jare.
Maanta shaqooyinka taranka waxaa lagu sameeyaa Kalmyk taranka, waxaa loogu talagalay inay hagaajiyaan biseyada hore, miisaanka nool, hagaajinta dastuurka iyo xogta dibedda. Hagaajinta caanaha waxay ku salaysan tahay tarbiyada nadiifka ah.
Sharaxaad dibedda ah ama sida loo aqoonsado lo'da Kalmyk
Dibedda wakiilada kalmik Kalmyk ee lo'da waa qurux badan. Su'aalaha ugu muhiimsan waa casaan, brown, muraayad ama casaan, inta badanna dhibco cad ama calaamado (madaxa, lugaha, marar badan jirka).
Tani waa jilicsan waxa loola jeedaa hilibka waaweyn, waa wax caadi ah in lo'da ay gaaraan 400-550 kiiloogaraam, miisaanka celceliska qashinku waa qiyaastii 600 ilaa 1100 kiilo garaam.
Dhismaha hilibka lo'da-shaqeeya, waa muhiim sifooyinka waa sida soo socota:
dastuur adag oo jidhka ah, taas oo xayawaanka ku adkeynaya;
inta badan dhererka jidhka, kaas oo ka dhigaya lo'da badan mobile;
Marka la barbardhigo nuuca Yurub, lo'da kalmykku waxay leedahay madax aad u yar, gorgortan leh, oo leh qayb weyn oo hore. Qeybta hore waa mid gaaban, gundhig u ah.
Gadaashiisa, qashinka iyo qadarka wakiillada si fiican loo yaqaan 'breed' waa kuwo ballaaran oo xitaa,
lugaha waa kuwo xoog leh, si sax ah loo dhigo, iyada oo aan wax dhibaata ah lagu wareejin miisaanka xayawaanka;
qoortu waa fareem, adagtahay, laakiin aad u gaaban - waxay u muuqataa in madaxa uu isla markiiba soo galo garbaha;
Lo'da kalmykku waxay leedahay qulqul yar oo xoqan, oo abuuraya aragti ah bood;
geesaha dhaadheer oo kor loo qaadayo iyo gudaha;
laabta ayaa ah mid ballaaran oo qotodheer, muruqyada muraayadda qiiqa ayaa si wanaagsan loo horumariyaa;
Dhamaan muslimiinta buuggan waa mid aad u horumarsan, kaas oo siinaya muuqaalka xayawaanka ku wareegsan;
candho xoolo yar yar, taas oo lagu sharraxayo noocyada hilibka ee wax soo saarka lo'da;
qalfoofka, inkastoo iftiinka, uu yahay mid xoogan, taas oo ah waxa xogta culeyska ah ee xoolaha u baahan yahay;
qaybta guud waxay u dhigantaa mid caadi ah, oo ah nooc lo'da ah.
Si aad u gaarto qaangaadhka, xayawaanku wuxuu noqdaa mid aad u weyn, taas oo dabcan aad u wanaagsan. Ka dib oo dhan, weyn ee xayawaanka, sii kordhaya wax soo saarka hilibka.
Gaar ahaan, celcelis ahaan cabbirrada dadka waaweyn Noocyada Kalmyk waa:
dhererka qashinka waa 125 iyo 130 sentimitir;
santting dhererka jidhka laga bilaabo 145 ilaa 160 sentimitir, iyadoo ku xiran jinsiga xayawaanka;
laabta laabta ee garbaha 186-188 sentimitir;
qoto dheer oo xabadka ah 65-70 sentimitir;
Haddii quudinta uu cuno kalmik Kalmyk waa mid wanaagsan oo nafaqo leh, ka dibna xajka muruqyada ayaa si dhakhso ah u kordhi doona
. Nasinta muruqyada ee qaybta dambe ee jidhka xayawaanka ayaa si khaas ah u wanaagsan. Wakhtiga cimilada qabow, lo'da Kalmyk ayaa ku baxda dhogor dheer oo hoos u dhiga, taas oo loogu talagalay heerkulbeegga ugu weyn.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee Kalmyk ee lo'da ama sababta ay lagula talin lahaa caanaha lo'da?
Xulashada dabiiciga ah ee adag, oo ay abuurtay xaalado nolol adag, ayaa diiradda saaray horumarka iyo xoojinta sifooyinka kuwaas oo siinaya xayawaanka fursada ugu badan ee noolaanshaha.
Fursadaha lagu noolaan karo waa xayawaanka ugu habboon, kuwaas oo horey u soo saaray dhismooyin gaar ah. Natiijada, Kalmyk ee lo'da ee lo'da waxaa lagu dhajiyay sifooyin u gaar ah iyo guryaha kuwaas oo si weyn u kordhiya qiimaha marka loo eego caleemaha kale ee kale.
Ka mid ah sifooyinka badan, ugu weyn faa'iidooyinka jilicsan waxaa lagu magacaabi karaa waxyaabaha soo socda:
Xasillooni aad u sarreeya.
Caanahan, iyada oo aan wax khasaare ah u geysan caafimaadka, waxay si fudud u adkeyn karaan barafka casriga dheer (ilaa 35-40 ° C), dabaylaha qabow, iyo kuleylka kuleylka kulaylka illaa + 45 ° C iyo wixii ka sareeya, iyo sidoo kale xaalado kale oo cimilo qatar ah.
Xilliga jiilaalka, curadka this ee lo'da si dhakhso ah u koraa timo qaro weyn, iyada oo farqiga u ah fluff.
Nooca nooca timaha ee leh dufanka subcutaneous ayaa ku siinaya difaac lagu kalsoonaan karo oo ka yimaada dabaylaha iyo kulaylaha qalalan xagaaga.
Waxyaabaha aan qabyada lahayn.
Kalmyk ee lo'da ee lo'da gabi ahaanba aan qabin xaaladaha xabsiga iyo sifooyinka quudinta.
Xayawaankan waxaa loo habeeyey in ay ku noolaadaan xitaa daaqsinka, halkaas oo ay ku saleysan tahay cuntadu waxay noqon kartaa cawska-caleenta cagaaran, oo aan ku habboonayn isticmaalka xayawaanka kale.
Waxay awood u leeyihiin in ay raadsadaan cunto 15 ilaa 50 kiiloomitir, iyo sidoo kale inay raadiyaan cunto xilliga qaboobaha ee ka hooseeya barafka. Sidaa darteed, content ee caan this waxaa loo malaynayaa in si gaar ah u furan, iyo inta lagu jiro sanad dhan.
Waxsoosaar hilib wanaagsan leh.
In kasta oo xaqiiqda ah in xayawaanku ay u isticmaalaan daaqa keliya ma ahan tayada wanaagsan, hilibkoodu waa dhadhan fiican.
Gaar ahaan, waxaa la ogaaday in marka xayawaanka la quudiyo si ay ugu quudiyaan feed, hilibka lo'da ee laga helo iyaga lumiyo tayadiisa gaarka ah.
Caanaha dufanka nafaqada leh.
Inkasta oo tani ay tahay hilibka, la wadaag cunnooyinka caanaha ee qiimaha leh ayaa sidoo kale awood u leh.
Dabcan, marka la barbardhigo nuucyada kale, milkayarkoodu aad ayuu u hooseeyaa, laakiin Kalmyk Burenkans ayaa caan ku ah xaqiiqda ah in dufanka caanuhu uu gaaro 4.2-6.4%.
Dhalinta fudud iyo dib-u-dhiska sare.
Tani waxay calaamad u tahay heerarka sare ee bacriminta iyo dib u dhiska.
Cows wuxuu abuuri karaa caruur caafimaad qaba muddo shan iyo toban sano ah. Boqolkiiba boqolkiiba ayaa la gaarsiiyaa 95.
Xitaa iyada oo la'aanta ah ee quudinta jiilaalka, iyo miisaanka lumis weyn, lo'da si fiican loo daryeelo, iyo xilliyada guga waxay si deg deg ah u soo kabashada foomamka lumay.
Nidaamka dheef-shiid kiimikaadka wanaagsan, oo si fiican u habboon cawska iyo kalluunka.
Xayawaanka caanahan oo idil ah waxay leeyihiin nidaam dheef-shiid kiimikaad hooseeya, taas oo u ogolaaneysa inay cunaan qadar badan oo cawska daaqsinka ah iyo qalafsanaan, cunto culus.
Awoodda dib u soo kabashada miisaanka.
Xaalad aad u weyn oo miisaankeed jirka ah ee xilliga jiilaalka, lo'da ee caanaha this guga, oo muuqaalka muuqaalka daaq wanaagsan, si dhakhso ah u soo celiyaan foomka lumay. Waxaa intaa dheer, dhibcaha noocan oo kale ah ma keenaan waxyeelo caafimaad.
Horumarka hore, horumar degdeg ah.
Xoolaha Kalmik wuxuu leeyahay hantida dhaqaale ee muhiimka ah - qaan gaar ah oo qoto-dheer dabiiciga ah.
Ilaa siddeed bilood, daacadku waxay gaadheen 30-35% oo qalalan oo ku jira qaybta hilibka ee baqashada, 11-16% baruurta iyo 20-26% borotiinka.
Isticmaalka daaqsinta fiican - wax walba waa la cunaa.
Xitaa haddii ay yihiin daaqsinka steppe steppe, lo'du waxay hubaal tahay inay ogaadaan sida loo buuxiyo cuntada.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan cayayaanka lo'da ugu fiican ee lo'da.
Faa'iidooyin yar yar oo ah kalmada kalmik ee lo'da
Dareenka hooyada ee sarreeya ee lo'da Kalmyk lagama dhimi karo. Inta badan hooyada, ee ku xigta kubka wuxuu u dhaqmaa si xad dhaaf ah, xitaa marka la eego milkiilaha, qofna uma ogolaanayo.
Heerka masduulka duufku waa mid aad u ballaadhan oo ah mawduucan maanta ayaa loo tixgeliyaa faa'iido daro. Xaaladdan, xayawaanku weli ma dhicin dareenka duurjoogta.
Waa kuwee sifooyinka xoolaha kalmik Kalmyk kasta oo ay tahay in ay ogaadaan?
Kalmyk ee lo'da ee lo'da gaarka ah waxay ururiyaan nafaqooyinka kaydka ee jirka, gaar ahaan dufanka. Qalabkani wuxuu si cad u bilaabmayaa inuu muujiyo xilliga dayrta goor hore, ka hor bilawga xilliga jiilaalka, iyo hantidan looma lumay xitaa markii daaqu ay yar tahay, lo'duna waxay ku jireen daaqsinka oo keliya.
Kaydinta dufanku marka hore waxay bilaabaan inay sameeyaan foomka biyo ka yar maqaarka, kadibna xubnaha gudaha, gudaha muruqyada iyo iyaga u dhexeeya.
Haddii ay jirto cunto la'aan xilliga jiilaalka, dufanka la dhigo ayaa loo bilaabaa in loo isticmaalo si gooni ah. Tani waxay ku salaysan tahay, taranka lo'da Kalmyk wuxuu leeyahay dhaqdhaqaaqa xilliyeed ee miisaanka iyo dufanka.
Lo'da inta lagu jiro xilliga qaboobaha waxay lumin kartaa 30 illaa 70 kiiloogaraam miisaanka nool. Isla mar ahaantaana, ka hor inta aanad u baxin daaqa, waxay u ekaan doontaa cunto dhexdhexaad ah. Haddii ka hor inta daaqsinta qaboobaha ay fiicnayd, markaa lo'da waxay yeelan doontaa dufanka ugu sarreeya.
Nidaamka dheef-shiidka ee xayawaankani waa mid aad u fiican, waxana uu kuu ogolaanayaa inaad cunto tiro badan oo caws oo daaqa ah iyo bulk, duufaan. Dhammaan nafaqooyinka la helay waxaa jidhka ka hela inta ugu badan ee suurtogalka ah.
Maxay ku caawineysaa lo'da Kalmyk in ay u adkeyso xaaladaha heerkulka ka soo horjeeda?
Waxaan si joogta ah u xooga saarnay adkeysiga aan caadiga ahayn ee taranka. Waxa kale oo haboon in la sheego wax badan oo ku saabsan maqaarka Kalmyk maqaarka, oo ah saldhigga noocan oo kale ah.
Marka laga soo tago xaqiiqda ah in timahooda dhogor dhaadheer ay dheer yihiin oo ay leeyihiin alaab difaac ah, waxaa sidoo kale lagu qasi karaa qalabka kuleylka.
Inta lagu jiro muddooyinka diiran ee sanadka, ka dib marka uu dhamaado moltwada, jidhku wuxuu ku daboolan yahay jaakad siman, dhalaalaya dhalaalaya oo muujinaya qorraxda qoraxda. Maxaa sii dheer, bilawga maalmaha diiran, waxay u oggolaaneysaa xayawaanka in ay ku qaataan ugu badnaan wakhti xagasha iyo buuraha buuraha. Ma jiraan noocyo kale oo lo 'ah oo ku faani kara muuqaalkan.
Heerkulka jirka oo deggan - Tani waa mid aan caadi ahayn oo isla mar ahaantaana awoodda qiimaha leh ee dhaqdhaqaaqa ayaa mar walba soo kordhay xiisaha sare ee xoola-dhaqatada qibrada leh.
Qeybta ugu hooseysa waa awooda lagu ilaaliyo heerkulka jidhka oo xasiloon iyo qorraxda kulul, iyo hoos u dhaca dabaysha, iyo jiilaalka adag ee adag. Cilmi-baadhayaashu waxay yiraahdeen oo kaliya isbeddellada yaryar ee dhawrka digrii.
Xasilinta noocan oo kale ah ayaa la hayaa sannadka oo dhan. Xayawaankani, oo bilawga ah cimilada qaboobta, maqaarku way qarisaa. Waxaa habboon in la ogaado qadar badan oo ah qanjidhada qanjirada iyo qanjirada dhididka.
Noocyada lo'da Kalmyk maanta
Dhawaan, kalmik Kalmyk ayaa sii kordheysa loo isticmaalay si loo hagaajiyo tayada hilibka ee caanaha lo'da iyo lo'da caanaha iyo warshadaha warshadaha.
Tani waa ilbax aad u fiican oo ah hiddaha hidaha. Tijaabadu waxay muujiyeen natiijooyin wanaagsan marka la siinayo lo'da tayada sare leh ee naas nuujinta ee Kalmik dheddigga.
Waqtigan xaadirka ah, wareegyada gurguurada iyo aagagga dhul-beereedka ee Ruushka, waxaa jira qiyaastii 90% dadka lo'da ee Kalmik. Xaaladahan oo kale, ma jiro ilmo kale oo ah lo'da ee jihada hilibka ee waxsoosaarkooda, taas oo ka dhigi karta tartan caafimaadka ah ee xayawaanka Kalmyk.
Caanaha ayaa sidoo kale ku guuleysta caan u ah guryaha lagu hayo, maaddaama ay ku habboon tahay nooca beerashada. Dad badan oo xoolo-dhaqato ah ayaa joojiya daaqsiyada waaweyn ee loo baahan yahay taranka lo'da Kalmyk.
Markii hore, dibedda ee lo'dadan ee lo'du waxaa badanaa loo adeegsan jiray foosha, kaas oo sidoo kale lagu dhaqmo illaa iyo hadda ilaa gobollada waqooyiga ee Russia. Maanta, dibedda waa qiimo weyn sababta oo ah tayada dhadhanka sare ee hilibka.
Muujiyeyaasha wax soo saarka, ama dhammaan doodaha, sababta ay u habboon tahay taranta this
Waxyaabaha aan la qabin ee xoolaha si ay u quudiyaan, iyo sidoo kale suurtogalnimada isticmaalka daaqa qaboobaha, ayaa shaki ku jiri kara tirooyinka wax soosaarka ee lo'da lo'da. Laakiin isla markaaba, gabi ahaanba wax kharash ah laguma hirgelin karo barbaarinta lo'da.
Gaar ahaan tan iyo tilmaamaha wax soo saarka beeraha weli waxay joogaan heer sare:
Kalmyk ee lo'da ayaa waxaa lagu gartaa naaxin degdeg ah xilliyada gu'ga iyo xilliga dayrta, iyo sidoo kale dayactirka joogtada ah ee dufanka muddooyinka xilliga jiilaalka iyo waqtiyada abaaraha.
Xayawaanku waxay ku faani karaan tiro badan. Miisaanka nool ee lo'da waa 400 - 550 kiilo, dibi - 600 - 1000 kiilo.
Xayawaankan xawaaraha sare leh iyo kartida miisaanka ayaa si dhakhso ah u kala soocaya: markuu dhasho, duufku wuxuu culeyskiisu yahay 22-25 kg, oo leh xaalado nadiif ah oo wanaagsan, helitaanka maalin kasta ee miisaanka nool ee kubka Kalmyk wuxuu noqon doonaa ilaa 1300-1500 garaam.
Bixinta kharashka waa 5.6-6.0 qaybood oo quudiya, xayawaanku waxay bixiyaan qiyaastii hal kiilo oo faa'iido ah.
Digaalladu waa inay gaaraan miisaanka 450-550 kiiloogaraamaya da'da 11/2, haddii la gooyey gumeysi, 380-420 kiilo garaam.
Milkaha ee lo'da ee caan this waa ma buuxiyo heerar sare, taas oo aan la yaab leh for taranka hilibka.
Isugeynta celceliska caanaha sanadlaha ayaa ka bilaabanta 650 ilaa 1200 kiiloogaraam oo caano ah, laakiin dufanka caanahan ayaa aad u sarreeya - 6.4%, iyo qiyaasta borotiinka - 4.8%.
Tilmaamaha noocan ah ee baruurta hilibka lo'da ayaa si fudud u sarreeya.
Haddii lo'da loo hayo xaalad wanaagsan oo ay bixiso quudin wanaagsan, markaas celceliska caanaha sanadlaha ah wuxuu kordhin karaa 1500 kiiloogaraam oo caano ah.
Hilibka ayaa dhadhan fiican leh, wuxuu leeyahay qiimaha nafleyda iyo tamarta sare.
Hilibku waa jilicsan, oo jilicsan oo leh jaantus yar oo ah xayawaan. Baqtigu waa guduud mugdi ah oo leh barar jaale ah oo dufan ah.
Boqolkiiba taranka dhalmada iyo haynta xoolaha nool ee Kalmik xooluhu waa mid aad u sarreeya oo aan la helin jinsi siman.
Waxaa jira 89-95 oo dibi ah boqol boqolkiiba dumarka, tiradaasi waxay ka weyntahay xaalada hadda jira ee noocyada kale ee hilibka lo'da. Lo'da Kalmyk waxay abuuri kartaa caafimaad iyo caafimaad, toban sano ilaa shan iyo toban sano.